Sideen ku ogaan karaa in processor-kaygu uu taageerayo 64 bit. | Laga soo bilaabo Linux
Sideen ku ogaan karaa in processor-kaygu uu taageerayo 64 bit.
Tani waa arrin keentay jahwareer badan oo ka dhex jira dadka isticmaala. Xitaa markay u maleeyaan inay garanayaan jawaabta, badanaa way qaldan yihiin.
Waxay u muuqatay mid caqli gal ah in hadda la keeno iyada oo la fiirinayo soo socota Ubuntu 10.04 iyo Fedora 13. Sidaan wada ognahay, qeybino badan oo Linux ah waxay leeyihiin noocyo loogu talagalay 64-bit processor. Halkani waa meesha mushkiladdeennu ka taagan tahay: Mashiinkaygu ma taageeri doonaa xoogaa 64? Ma soo dejisan karaa nooca yar ee 32 haddii ay dhacdo? Su'aalahana way sii socdaan ...
Kahor intaanan bilaabin soo bandhigida waxyaalahan qarsoodiga ah, aan cadeyno in si loo qaado tijaabooyinka aan halkaan ku sameyn doono waxaa lagama maarmaan ah inaad horey u haysatid Linux (wixii distro ah) ee lagu rakibay mashiinkaas. Haddii kale, waad ku ordi kartaa amarradan adoo Linux ka duubaya LiveCD.
Aynu bilowno inaan kala saarno ogaanshaha waxa dhabta ah ee qalabkaaga uu taageerayo iyo nooca kernel ee aad ku shaqeyneyso qalabkaas.
Hadaad rabto inaad ogaato inaad adiga hardware waxay taageertaa xoogaa 64, fur terminal oo socod:
calamada grep / proc / cpuinfo
Haddii lm u muuqato natiijada, markaa waxay taageertaa 64 waxoogaa; haddii Habka la ilaaliyo u muuqdo, wuxuu taageersan yahay 32 bit; haddii Real Mode u muuqato, waxay taageertaa 16 bit.
Hadaad rabto inaad ogaato inaad adiga kernel hadda waxay taageertaa xoogaa 64, fur terminal oo socod:
Haddii natiijadu muujiso "x86_64 GNU / Linux" taasi waxay muujineysaa inaad ku socoto 64 bit Linux kernel ah. Taabadalkeed, hadaad aragto "i386 / i486 / i586 / i686", waa 32 bit kernel.
Goorta ay tahay inaad go'aansato nooca Ubuntu, Fedora ama wixii kale ee distoor ah ee aad soo dejiso, waxa muhiimka ah waa kan ugu horreeya ee amarrada, maaddaama ay tilmaamayso haddii qalabkaaga uu taageerayo 64 bit.. Amarka labaad wuxuu kaliya kuu sheegayaa nooca kernel ee aad rakibtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Sideen ku ogaan karaa in processor-kaygu uu taageerayo 64 bit.
fpu vme from pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtesther64 monitor ds_cpl sscc
Marka waxaan wadaa 64-bit system systems
Natiijada aad wadaagto, waxaa jira liis ah "lm", sida lagu muujiyey boostada.
Taas macnaheedu waxa weeye marka xigta ee aad soo degsan karto nooca 64-bit-ka ah ee aad ugu jeceshahay distroorka oo aad rakibi karto noocaas. Taasi waxay ahaan laheyd, marka lahadlo, "lagugula taliyay" oo kusalaysan qalabka aad haysato.
Waxaan rajeynayaa inaan caawinaad ka helay.
ok waan orday "grep flags / proc / cpuinfo" waxaanan helayaa waxyaabaha soo socda:
FPU vme PSE TSC MSR PAE mce cx8 apic mtrr PGE MCA cmov taabasho PSE36 clflush mmx fxsr SSE sse2 syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb RDTSCP lm 3dnowext 3dnow constant_tsc ilaa NONSTOP_TSC extd_apicid monitor pni CX16 popcnt lahf_lm SVM extapic cr8_legacy ABM SSE4A 3dnowprefetch osvw IBS skinit wdt nodeid_msr npt lbrv svm_lock nrip_save
Waxaan wadaa kubuntu 10.4 oo sifiican uma aanan fahmin tan waxaan kucusub ahay Linux laakiin kumbuyuutarkaygu wuxuu leeyahay amd waxayna ii sheegeen inay amdku taageerto labada nooc ee 32 iyo 64.
su'aashu waxay tahay miyaan kala soo bixi karaa 64 nooc nooc ah? (Waxaan isticmaalayaa mid 32-bit ah)
Haa, haddii laptop-kaaga uu ku yiraahdo banaanka AMD, waxay ka dhigan tahay, inaad rakibi karto nooc kasta oo ka mid ah 64bit distros
Masiixi ah dijo
Qoraal aad u fiican, aad ayaad u mahadsan tahay. Waxaan kuu sheegayaa in amarka labaad amarkiisu si fiican u dhacay, waxaan wadaa ordo 64 kernel ah.Laakiin amarkii ugu horeeyey ee aan kan helay: miyaad sharaxi kartaa waxa dhaca fadlan?
messianico @ barsa-desktop: ~ $ grep calamada / proc / cpuinfo
calamada: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl cscs ht tm pbe syscall nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl apercm64 s2prm psxt tni est_dpltesm Monitorxm3prm Monitor pdcm xsave lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
Mahadsanid iyo salaan!
Ku jawaab messianico
Sida aad u aragto, lm wuxuu muuqdaa marka la fulinayo amarka koowaad, markaa waad awoodi kartaa, runtiina waad sameyn kartaa, oo aad maamuli kartaa 64-bit Linux ah. 🙂
Waxaan ku jiray kumbuyuutareedkan usbuuc. Toddobaad aad u adag "waxbaran" (Waxaan aqriyay 10 qoraal oo isku xigxiga boggan, oo aad ufiican!). Waan layaabay markaan arko in sidaan qabo laptop-kaygu wuxuu taageerayaa kernel 64-bit ah.
Waxaan tiriyaa noloshayda: Waa hp530 laga bilaabo qiyaastii 6 ama 8 sano ka hor, waxayna leedahay 1Gb oo RAM ah. Kheyraadka si dhakhso leh ayuu u dhammaaday waana ka walwalsanahay maxaa yeelay aad buu u kulul yahay. Marka ku rakib aaladda Xubuntu 12.04. Waxaan si joogto ah ula socdaa isticmaalka kumbuyuutarka iyo xusuusta si aan u ogaado waxa dhacaya, dhibaatada kaliya ee aan hadda haysto ayaa ah in markaan fiidiyoowyo ku dhex socdo firefox-ka uu cpu-ga tago 100%. Soo dejiso nooca 32 waa sababta ay u leedahay markii la soo dejinayo ubuntu:
"Haddii aad haysatid kombuyuutar ka da 'weyn oo xasuustiisu ka yar tahay 2GB, dooro soo dejinta 32-bit ah."
Ubuntu 13.10 32-bit ayaan usoconayay (waxaan ka baqayaa midnimada darteed), waxaan ku ogaaday dariiqadan hadana waan ku faraxsanahay.
Laakiin hadda waxaan 'ku ogaaday' halkan inaan isku dayo 64-bit (dabcan xubinta dabcan). Miyay noqon kartaa inkasta oo Gb kaliya ee aan leeyahay, cpu-ku uu u shaqeeyo si la mid ah ama dabacsan x64? Weliba way ila yaaban tahay maxaa yeelay waxaan u maleynayaa in processor-kaygu uu yahay hal xudun. Aah! waxa ii muuqda terminalku waa isku mid sida ku muuqata faallada koowaad.
Aad baad ugu mahadsantahay shaqadaada, saaxiib!
Haa, waa inaadan wax dhibaato ah qabin, xitaa haddii aadan dareemin farqi weyn oo u dhexeeya qaab dhismeedka iyo xawaaraha fulinta, waxaan kuu ballan qaadayaa in processor-kaaga uu
Hagaag aakhirkii waxaan ku tijaabiyey qayb yar oo aan ka sameeyay tijaabada. Heerkulku weli waa sidiisii ​​(55º - 65º). Waa run in cpu-ka uusan umuuqan mid waxbadan dhergaya, tusaalaha youtube-ka wuxuu hada marayaa 30%. Si kastaba ha noqotee, waxay nuugtaa xusuus aad u badan oo aan u maleynayo inaan ku dhajin doono 32 xabo. Hadda waxaan heystaa kaliya Firefox oo leh 4 tab oo waxaan heystaa 2/3 ee giggii weynaa. Waad ku mahadsantahay jawaabta!
Elm Axayacatl dijo
Waxaan u baahday inaan ogaado xogtaan. Waad ku mahadsantahay amarrada.
Jawaab Olmo Axayacatl
indira @ indira-GA-VM900M: ~ $ grep calamada / proc / cpuinfo
calamada: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 cid cx16 xp
ma waxaad u jeeddaa pc-ga inuu yahay 64 bit? waxaan ordayaa 32 bit
Matias Olivera dijo
Way ka fududahay amarka lscpu; sadarka labaad wuxuu muujinayaa in microprocessor-ku uu taageerayo kaliya 32 jajab (x86) ama 64 jajab (x86_64).
Ku jawaab Matías Olivera
Xaqiiqdii waad saxan tahay sidaad horeyba u dhigtay waad u ogayd ka hor liiska hore
kani waa natiijadeyda fpu vme oo ka timid pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dcplx pc dcc sse64 ss ht tm pbe nx lm joogtada_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtespl2 cm3 monitor ds_scxt pni dtespl16 cmXNUMX Monitor ds_ dtherm
sidoo kale waxay taageertaa noocyada 64bit.
Jawaab maria teresa
Waan yara wareersanahay. Hadda waxaan ogaaday in laptop-kayga qaaliga ah ee qaaliga ah uu yahay 64 waxoogaa, laakiin kernelku waa i686 (ama 32 bit).
Had iyo jeer waxaan isticmaali jiray 32-bit distros. Waxqabadka miyuu fiicnaan doonaa haddii aan rakibo 64-bit distro?
Haye, ma hagaajin kartaa tan? Su’aal isku mid ah ayaan qabaa
Ku jawaab Camill
Tani waxay kuxirantahay nooca softiweer ee aad u isticmaali doontid nidaamka, iyo qadarka RAM ee kombiyuutarka, guud ahaan, farqiga u dhexeeya 32 iyo 64 jajab ayaa bilaabmaya inuu muuqdo kadib 4 Gb oo RAM ah, haddii aad ka yar, waa wax aan la dareemi karin, haddii ay intaa ka sii badan tahay, farqiga ayaa lagu caddeyn karaa barnaamijyada culeyska culus (sida Virtualbox ama qaar ka mid ah sawirrada ama barnaamijka tafatirka fiidiyowga), waxaan rajeynayaa inay caawinayso
Calanka Grep / proc / cpuinfo ayaa ii muuqda
Miliqeyaha 'Pulse Audio Mixer': tufaax cusub oo lagu xakameeyo mugga GNOME
Diiwaangeliyaha ugu horreeya ee "bilaash" ah ee Blu-Ray wuu soo baxay!